ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ | NLD
Home News Breaking News ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 26, 2017 In: Breaking News, NewsNo Comments
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ ကျင်းပသည့် (၇၂) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ အထွေထွေမူဝါဒရေးရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီ (John F Kennedy) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ကိုရီးယားလေ ကြောင်းလိုင်း ဖြင့်ထွက်ခွာရာ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့သို့ရောက်ရှိကြသည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး သူရဦးသက်ဦးမောင် နှင့်သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများက အင်ချွန်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့မှတစ်ဆင့် ဒုတိယသမ္မတနှင့် အဖွဲ့ သည် ဒေသစံတော်ချိန် ၆နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရာ ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။
ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှ ဒုတိယ သံအမတ် H.E. Mr. George Neil Sibley နှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ဒုတိယသမ်မတ ဦးဟငျနရီဗနျထီးယူသညျ အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးယောကျမွို့၌ ကငျြးပသညျ့ (၇၂) ကွိမျမွောကျ ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေေ ညီလာခံ အထှထှေမေူဝါဒရေးရာ ဆှေးနှေးပှဲသို့ တကျရောကျခဲ့ပွီး မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူ စကျတငျဘာ ၂၄ ရကျ ဒသေစံတျောခြိနျ မှနျးလှဲ ၂နာရီတှငျ အမရေိကနျနိုငျငံ နယူးယောကျမွို့ ဂြှနျ အကျဖျ ကနဒေီ (John F Kennedy) အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျမှ ကိုရီးယားလေ ကွောငျးလိုငျး ဖွငျ့ထှကျခှာရာ စကျတငျဘာ ၂၅ ရကျ ဒသေစံတျောခြိနျ ညနေ ၅ နာရီ မိနဈ ၂၀ တှငျ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ ဆိုးလျမွို့သို့ရောကျရှိကွသညျ။
ဒုတိယသမ်မတဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ကိုရီးယားသမ်မတ နိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး သူရဦးသကျဦးမောငျ နှငျ့သံရုံးမှတာဝနျရှိသူမြားက အငျခြှနျးအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ၌ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ထို့မှတဈဆငျ့ ဒုတိယသမ်မတနှငျ့ အဖှဲ့ သညျ ဒသေစံတျောခြိနျ ၆နာရီ ၄၅ မိနဈတှငျ ကိုရီးယားလကွေောငျးလိုငျးဖွငျ့ ဆကျလကျထှကျခှာလာရာ ညပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့သို့ ပွနျလညျရောကျရှိကွသညျ။
ဒုတိယသမ်မတနှငျ့အဖှဲ့အား ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး၊ တိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အမရေိကနျသံရုံးမှ ဒုတိယ သံအမတျ H.E. Mr. George Neil Sibley နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက ရနျကုနျ အပွညျပွညျ ဆိုငျရာလဆေိပျ၌ ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။